ကစားသမားဟောင်း ဖာဒီနန်သုံးသပ်ပြတဲ့ပင်နယ်တီကန်ခွင့်တာဝန်နှင့် ဖရီးကစ်ကန်ခွင့်တွေအကြောင်း – MAN U FAN CLUB
MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 24: Bruno Fernandes of Manchester United scores their side's third goal fromafree kick during The Emirates FA Cup Fourth Round match between Manchester United and Liverpool at Old Trafford on January 24, 2021 in Manchester, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Phil Noble - Pool/Getty Images)
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဂန္ထဝင်နောက်ခံလူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖာဒီနန်က အသင်းကို စီရော်နယ်လ်ဒိုရောက်ရှိလာတာကြောင့် ပယ်နယ်တီပုံမှန်ကန်နေတဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာ အဲဒီတာဝန်ကို စီရော်နယ်လ်ဒိုဆီလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရှိပေမယ့် ဖရီးကစ်တွေကိုတော့ ဆက်လက်ကန်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ တစ်ချိန်ကအသင်းနဲ့အတူ ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရယူခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ သောကြာနေ့က ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေးအဖြစ် ယူရို(၂၃)သန်းပေးချေဖို့ရှိသလို နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့စျေးကွက်ပိတ်မယ့် ဒီနေ့(အင်္ဂါ)ညသန်းခေါင်ယံအချိန်မှာ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စကို အပြီးသတ်သွားဖို့ရှိနေပါပြီ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုရောက်လာလို့ နည်းပြဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ Set-Pieces တွေကို စီရော်နယ်လ်ဒိုကိုသာ ဦးစားပေးတာဝန်ပေးမယ်လို့ ခန့်မှန်းမှုတွေထွက်နေပေမယ့် ဖာဒီနန်ကတော့ ဆိုးလ်ရှားဟာ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကို လျစ်လျူရှုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆနေတာပါ။
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလက စပို့တင်းလစ္စဘွန်းကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာ လက်ရှိယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေထဲမှာ သွင်းဂိုးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး သူသွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးအများစုက ပယ်နယ်တီကနေသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်အသင်းတွေမှာ ပယ်နယ်တီပုံမှန်ကန်သွင်းလေ့ရှိပြီး အခု ယူနိုက်တက်အသင်းမှာလည်း ပယ်နယ်တီကန်သွင်းတဲ့တာဝန်ရယူဖို့ရှိပေမယ့် နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ သူ့ရဲ့ဖရီးကစ်စွမ်းဆောင်ရည်က ကျဆင်းလာတာကြောင့် ဖရီးကစ်တွေကို ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ပဲ ဆက်ကန်ဖို့များနေပါတယ်။ ဖာဒီနန်က “ပယ်နယ်တီကန်မယ့်တာဝန်ကို ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် လက်လွှတ်ခံဖို့ရှိပေမယ့် ဖရီးကစ်နဲ့ထောင့်ကန်ဘောတွေကိုတော့ သူပဲ ဦးစားပေးကန်ဖို့များပါတယ်။ ပယ်နယ်တီဧရိယာနားမှာ ဖရီးကစ်ရရင် ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်သာ ကန်သင့်တယ်လို့လည်း ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖရီးကစ်သွင်းဂိုးမှတ်တမ်းတွေအရလည်း ဖရီးကစ်တွေကို ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ပဲ ဆက်လက်တာဝန်ယူကန်သွင်းသင့်ပါတယ်”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပယ္နယ္တီကန္ခြင့္တာဝန္ကို စီေရာ္နယ္လ္ဒိုဆီ ဘ႐ူႏို လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေပမယ့္ ဖရီးကစ္ကိုေတာ့ သူပဲကန္ဖို႔ရွိေန
မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ဂႏၴဝင္ေနာက္ခံလူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဖာဒီနန္က အသင္းကို စီေရာ္နယ္လ္ဒိုေရာက္ရွိလာတာေၾကာင့္ ပယ္နယ္တီပုံမွန္ကန္ေနတဲ့ ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ဟာ အဲဒီတာဝန္ကို စီေရာ္နယ္လ္ဒိုဆီလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ရွိေပမယ့္ ဖရီးကစ္ေတြကိုေတာ့ ဆက္လက္ကန္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ ခန႔္မွန္းလိုက္ပါတယ္။
ယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ တစ္ခ်ိန္ကအသင္းနဲ႔အတူ ႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြရယူခဲ့တဲ့ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုကို ျပန္လည္ေခၚယူဖို႔ ေသာၾကာေန႔က ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းနဲ႔သေဘာတူညီမႈရခဲ့ၿပီး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေၾကးအျဖစ္ ယူ႐ို(၂၃)သန္းေပးေခ်ဖို႔ရွိသလို ေႏြရာသီအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ေစ်းကြက္ပိတ္မယ့္ ဒီေန႔(အဂၤါ)ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ကိစၥကို အၿပီးသတ္သြားဖို႔ရွိေနပါၿပီ။ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုေရာက္လာလို႔ နည္းျပဆိုးလ္ရွားအေနနဲ႔ Set-Pieces ေတြကို စီေရာ္နယ္လ္ဒိုကိုသာ ဦးစားေပးတာဝန္ေပးမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းမႈေတြထြက္ေနေပမယ့္ ဖာဒီနန္ကေတာ့ ဆိုးလ္ရွားဟာ ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆေနတာပါ။
၂၀၂၀၊ ဇန္နဝါရီလက စပို႔တင္းလစၥဘြန္းကေနေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သူ ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ဟာ လက္ရွိယူႏိုက္တက္ကစားသမားေတြထဲမွာ သြင္းဂိုးအတြက္ပါဝင္ပတ္သက္မႈအမ်ားဆုံးကစားသမားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး သူသြင္းယူခဲ့တဲ့ဂိုးအမ်ားစုက ပယ္နယ္တီကေနသြင္းယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုဟာ ရီးယဲလ္၊ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္နဲ႔ ေပၚတူဂီလက္ေ႐ြးစင္အသင္းေတြမွာ ပယ္နယ္တီပုံမွန္ကန္သြင္းေလ့ရွိၿပီး အခု ယူႏိုက္တက္အသင္းမွာလည္း ပယ္နယ္တီကန္သြင္းတဲ့တာဝန္ရယူဖို႔ရွိေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ သူ႔ရဲ႕ဖရီးကစ္စြမ္းေဆာင္ရည္က က်ဆင္းလာတာေၾကာင့္ ဖရီးကစ္ေတြကို ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ပဲ ဆက္ကန္ဖို႔မ်ားေနပါတယ္။
ဖာဒီနန္က “ပယ္နယ္တီကန္မယ့္တာဝန္ကို ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ လက္လႊတ္ခံဖို႔ရွိေပမယ့္ ဖရီးကစ္နဲ႔ေထာင့္ကန္ေဘာေတြကိုေတာ့ သူပဲ ဦးစားေပးကန္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ ပယ္နယ္တီဧရိယာနားမွာ ဖရီးကစ္ရရင္ ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္သာ ကန္သင့္တယ္လို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဖရီးကစ္သြင္းဂိုးမွတ္တမ္းေတြအရလည္း ဖရီးကစ္ေတြကို ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ပဲ ဆက္လက္တာဝန္ယူကန္သြင္းသင့္ပါတယ္”လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဘာစီလိုနာက ချိတ်ဆက်ခဲ့ပေမယ့် ယူနိုက်တက်မှာ ဆက်ရှိမယ့် ကာဗာနီ